स्वास्थ Archives - Page 8 of 18 - Dna Nepal
बञ्जारालाई युआरएल पत्रकारिता पुरस्कार २३ मंसिर २०७५, आईतवार १६:४९
पोखरा, मंसिर २३ । युआरएल पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार यदुनाथ वञ्जारा सम्मानित भएका छन् । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले उनलाई नगद १५ हजार र ताम्रपत्रसहित सम्मान गरे । पोखरा ८ न्युरोडमा रहेको युनाइटेड रेफरेन्स..
न हात–न श्रीमानको साथ, काँग्रेस नेता शर्माले किनिदिए घर बनाउने जग्गा १५ मंसिर २०७५, शनिबार १६:३८
झापा, मंसिर १५ । एउटा हात र श्रीमानको साथ गुमाएकी सुत्केरीलाई घर बनाउन नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जग्गा किनिदिएका छन् । ‘चौबिस दिनकी सुत्केरीको बिचल्ली’ भएको समाचार पढेपछि शर्माले आफ्ना छोरा शीर्षकको जन्मदिनमा देवी..
पोखराको खानेपानी शुद्धीकरण गर्न फिनल्याण्ड सरकारले ७३ करोड लगानी गर्दै १० मंसिर २०७५, सोमबार १५:१७
पोखरा, मंसिर १० । पोखरा महानगरपालिकाको खानेपानी शुद्धीकरण गर्नका लागि फिनल्याण्ड सरकारले पौने अर्व सहयोग गर्ने भएको छ । महानगरका ३३ वटै वडामा शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्नका लागि महानगरसँगको साझेदारीमा फिनल्याण्डले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन..
उपचारका लागि निर्मला पन्तका बुबालाई लठ्याएर काठमाण्डौं ल्याईयो ९ मंसिर २०७५, आईतवार १३:२४
काठमाण्डौं, मंसिर ९ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तका बुबा यज्ञराजको मानसिक अवस्था बिग्रिँदै गएपछि उपचारका लागि काठमाडौँस्थित शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । छोरीको बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउन माग..
निद्रा लाग्दैन ? सचेत हुनुस् ! ८ मंसिर २०७५, शनिबार ०८:३४
एजेन्सी, मंसिर ८ । हामीमध्ये कतिलाई राम्रोसँग निद्रा पर्दैन । मनमा कुरा खेलिरहन्छ । कसैलाई धेरै समय सुत्नुपर्छ भने कसैलाई थोरै समय सुत्दा पनि निद्रा पुग्छ । राति छिटो निद्रा खुल्ने, निद्रा खुलेपछि फेरि निदाउन नसकिने समस्या पनि हुन्छ । कहिले..
होसियार ! पैसाबाट छालारोग सर्छ ७ मंसिर २०७५, शुक्रबार १०:२०
एजेन्सी, मंसिर ७ । स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन खोज्नु मानवीय स्वभाव हो । मानिसले जानाजान स्वास्थ्य बिगार्न चाहँदैन । उसले सकेसम्म स्वास्थ्य ठीकठाक राख्न खोज्छ । स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन खोजे पनि दैनिकजसो गर्ने सानातिना असावधानीले उसलाई गम्भीर..
मर्निङ वाक गर्नुहुन्छ ? होसियार ! ३ मंसिर २०७५, सोमबार ०३:०२
एजेन्सी, मंसिर ३ । सहरका सडक छेउछाउ मर्निङ वाक गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने ख्याल गर्नुहोस् ! बाहिरी प्रदुषणका कारण हानिकार कण मिसिएपछि हावाले यतिबेला नैसर्गिक गुण गुमाएको छ । त्यसैले दुषित वायुका कारण फोक्सोलगायत संवेदनशील अंगमा..
ग्याष्ट्रिकको तनाव छ ? यसरी जोगिनुस् २५ कार्तिक २०७५, आईतवार ०१:२०
एजेन्सी, कार्तिक २५ । खाद्य नलीले खाएको खानेकुरा पेटमा र्पुयाउँछ । पेटमा प्रकृतिले एसिड निकाल्छ यो प्रकृतीजन्य कुरा हो । एसिडको आफ्नै काम हुन्छ । खानासँग भित्र गएका व्याक्टेरियालाई मार्नेदेखि खाना पचाउने काम एसीडले गर्छ । तर, त्यही समयमा..
प्रधानमन्त्री ओलिको अवस्था अन्यौल, प्रचण्डसहित नेताहरु धमाधम टिचिङमा १२ कार्तिक २०७५, सोमबार ०३:३२
काठमाण्डौं, कार्तिक १२ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको स्वास्थ्य अवस्था अन्यौल छ । श्वास प्रश्वासमा समस्या आएको भन्दै आज विहान ४ बजेट टिचिङ अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनलाई भेट्न नेकपा अध्यक्ष..
प्रधानमन्त्री ओली आइसियूमा भर्ना
काठमाण्डौं, कार्तिक १२ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनी शनिबारदेखि नै रुघाखोकीले ग्रस्त थिए । थप समस्या देखिएपछि आइतबार राति नै उनलाई महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टरको आइसियूमा भर्ना गरिएको..